Monetizer: Yenza imali ngentsalela yakho, Geo-yisa kwakhona okanye Phuma kuTrafikhi | Martech Zone
Monetizer: Yenza imali ngentsalela yakho, Geo-yisa kwakhona okanye Phuma kuTrafikhi
NgoLwesine, Agasti 25, 2016 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Yikholwe okanye ungakholelwa, lonke undwendwe kwindawo yakho hayi ithemba. Ukuba wenze imali kwindawo yakho ngeentengiso zomntu wesithathu, ezoqonga zentengiso zifuna amaxabiso okuguqula ukuze ube sempilweni kwaye ubonise iintengiso kubakhenkethi abafanelekileyo. Inani leempawu kunye neendawo kwindawo yakho ziyaziwa njengentengiso yakho Lweencwadi.
Yintoni iTraffic eseleyo?
Kuba iintengiso ezithengiweyo zijolise, kuthekani malunga neendwendwe ezishiyekileyo ezingajoliswanga? Ezo zithuthi ziyaziwa njengezithuthi ezisele. Ukugcwala kwetrafikhi yingxaki kubapapashi abakwi-Intanethi ngenxa yokuba yindlela abakwaziyo ngayo ukwenza imali.
Kwimakethi yentengiso ekwi-intanethi yanamhlanje, abapapashi abaninzi, abathengisi, kunye neenethiwekhi zentengiso abazisebenzisi ngokupheleleyo ukugcwala kwefowuni kunye newebhu abayenza yonke imihla. Ukongeza, iindwendwe ezivela kumazwe ekungajoliswanga kuwo zinokuchitha ngokupheleleyo kwaye amathuba okwenza imali etrafikhi eshiya amaphepha omthengisi awasoloko efumaneka.
Njengoko kunokuba nzima kakhulu ukugubungela onke amacandelo kunye nokujongana nayo yonke i-engile xa uzama ukwenza imali ekungajoliswanga kuyo, ukuphuma, okanye ukugcwala kwentsalela, iMonetizer sisisombululo esizenzekelayo, esisicwangcisiweyo sijongana nomcimbi.
Ukwenza imali yenza abapapashi ukuba bavelise amaphulo awodwa, aphuculweyo ukuze benze imali yezithuthi kumazwe angaphezu kwe-150. Inkqubo isebenzisa enye Unxibelelwano lweGlobal Smart. Ukufunda kwabo ngomatshini vAuto Ialgorithm ithathela ingqalelo indawo abakhenkethi abakuyo, inkqubo yokusebenza kwabo baphetheyo, kunye nezinye izinto - ukuze kuveliswe ii-eCPCs ezingaqhelekanga (iindleko eziphuculweyo ngokuchofoza nganye) kumaqabane ethu.
Iqonga lethu liyaqhubeka nokuvelisa iziphumo ezizodwa, kunye namaqabane amaninzi avelisa amawaka eedola kwingeniso yemihla ngemihla evela kutrafikhi enokuthi ihambe ingenziwa imali. Njengoko sihlala sigxile kubuchwephesha obusemva kweqonga, ukwenziwa kwamaphulo, kunye nobudlelwane obutsha kunye nabathengisi, sonwabile ukubona ukuba ikamva lisiphathele ntoni ngeMonetizer kunye namaqabane ethu! UMax Tetrault, uMlawuli weQabane, Ukwenza imali
Ukwenza imali okwangoku yenza imali ~ i-120 yezigidi zokucofa / ngosuku kunye ne-3 yezigidigidi zokucofa / ngenyanga ukusuka kumazwe angama-150 +. Bayakwazi ukwenza imali kokubini iselfowuni kunye newebhu (zombini ezona ziqhelekileyo kunye nabantu abadala). I-Global Smart Link yabo iyabhetyebhetye, kubandakanya ukhetho olunobuchule be-SEO. Isinxibelelanisi seqabane leMonetizer sinikezela ngeenkcukacha-manani zexesha lokwenyani kunye nokwenza ingxelo, ngentlawulo yeveki yengeniso eyenziweyo kumaqabane.
Ndothuka xa siqala ukumilisela iMonetizer. Itekhnoloji iyamangalisa, njengoko isenza imali kwitrafikhi esasizabalaze ngayo ngaphambili. UBert Xia, uMphathi woPhuhliso lweShishini, EweMobi
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: I-Monetizer okwangoku iqhuba imikhankaso yentengiso kwindawo yethu (nantso indlela endabaqaphela ngayo!)
tags: Uluhlu lweentengisoUluhlu lweentengisobert xiaecpciindleko eziphuculweyo ngokuchofozaUbuninzi beetraultumenzi-maliintsalela yezithuthiyintoni intsalela yezithuthiyehmobi
Izithintelo ezi-4 kuPhumezo oluZenzekelayo lokuThengisa
Agasti 26, 2016 kwi-6: 07 AM
Inqaku elihle malunga nendlela yokugxila kwitrafikhi eshiyekileyo !! izakuzama !!